Vashandi vehurumende vacharamwa mabasa zvakare neChina uye neChishanu mushure mekutadza kuwirirana nehurumende pamusangano wavaita.
Sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende, weApex Council, Amai Tendai Chikowore, vanoti musangano uyu hauna chawabuda nacho.
Amai Chikowore vanoti hurumende haina kutaura kuti ichatambirisa vashandi marii kunze kwekuvaudza kuti yakaisa parutivi mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emadhora semari dzemihoro yegore rose ra2012.
Amai Chikowore vanoti varamba izvi nekuti hurumende inofanira kupatsanura mari iyi kuitira kuti zvibude pachena kuti ndeipi yemari ichashandiswa pamihoro, pakubatsirikana, padzimba pamwe nemari yekufambisa.
Pachaitwa mumwe musangano zvakare nemusi weChipiri svondo rinouya. Vatiwo danho rinotevera richatorwa pachitariswa zvinenge zvabuda mumusangano uyu.
Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzinoti vashandi vehurumende vazhinji vange vari kuramwa mabasa, dzichiti avo vasiri kuramwa mabasa ndevaya vanoshandiswa nevakuru kutyisidzira vamwe kana kuti vanoita huwori kwavanoshanda.
Imwe nhengo yeApex Council, VaRaymond Majongwe, vanotiwo kana vashandi vese vakaramba kuita basa, zvichemo zvavo zvinogadziriswa nekukasika.
Vashandi vehurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi weMuvhuro svondo rino vachida kuti mari dzavo dzemihoro dziwedzerwe.
Vari kuda kuti mushandi anotambira mari yepasi pasi ange achitangira pamazana mashanu nemakumi matatu nemasere emadhora pamwedzi. Vashandi ava vange vadzokera kumabasa neChitatu vakamirira zvinobuda mumusangano wange uri kuitwa.
Panguva iyo vashandi vehurumende vari kutadza kuwirirana nevashandirwi pahurukuro dzemihoro, vashandi vepasi vemumapurazi vakawedzerwa mari dzavo dzepamwedzi nezvikamu zvinomwe kubva muzana, vachibva pamadhora makumi mashanu nemashanu pamwedzi, vachienda pamadhora makumi mashanu nemapfumbamwe.
Izvi zvakatevera hurukuro dzakaitwa nesangano rinomirira vashandi munyaya dzezvekurima, reNational Employment Council for Agriculture, pamwe nevashandirwi, vanove varimi.
Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vemumapurazi, reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, GAPWUZ, VaGift Muti, vanoti havasi kufara nemari iyi sezvo iri pasi-pasi zvikuru zvichienzaniswa nePoverty Datum Line.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe, VaProsper Chitambara, vaudzawo Studio 7 kuti pakuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, hurumende inofanirwa kuita ongororo yevashandi vayo kuitira kuti iburitse vari kuba mari ivo vasiri vashandi.
Panyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vemumapurazi, VaChitambara vanotiwo zvinosiririsa kuti vana muzvinapurazi vanopa vashandi vavo mari iri pasi pasi zvakadaro. Vati dambudziko riri pavarimi vatsva, avo vasiri kuda kubata vashandi vavo zvakanaka.
Hurukuro naVaGift Muti